सरकारले ल्यायो नयाँ ऐन,२८ हप्तामा गर्भपतन ? - NewsCenterNepal.com
सरकारले ल्यायो नयाँ ऐन,२८ हप्तामा गर्भपतन ?
अस्मिता रिजाल, काठमाडौं । सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा विना तयारी गर्भपतनको अवधि बढाएको छ । ऐन विज्ञहरुसँगको छलफलविना नै संसद्ले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै अहिले यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
बहिनीको चप्पल बगाएपछि टिप्न गएकी दिदी बेपत्ता